Nei Gayle Mambo waMeghan naHarry's Specials Zvingaita Kuti Vanhu Vadzoke - vanhu - TELES RELAY
HOME » VANHU & VANHU Nei Gayle Mambo waMeghan naHarry's Specials Zvingaita Kuti Vanhu Vadzoke - Vanhu
Nei Gayle Mambo waMeghan naHarry's Specials Zvingaita Kuti Vanhu Vadzoke - Vanhu
CLICK HERE kana uri kunetseka kuona mavhidhiyo kana mavhidhiyo pane foni
Kunyange zvazvo Gayle King angave asina kubvunzurudza chete kuMeghan Markle naPrince Harry nokuda kweBBC yake yakasiyana Chishanu manheru, inoshuma kuti ushamwari hwake navo hwakabvumira nzvimbo yake yekuAmerica kuva nechekare mushure-ye-zvikamu zvekusvika kune vakaroorana, izvo zvinogona kukonzera ukama hwavo hwekare hutsva nemaBritish media.
Gayle King anoenda kune "Vane Dhimoni". premiere pa Time Warner Center mu 2017. (Mufananidzo naMichael Loccisano / Getty Images)
maererano kubva ku Daily Daily British vezvenhau vanonetseka kuwedzera kuitwa "sidelined" pedyo Duchess uye Duke pamusoro neSussex, wakanaka kune zvikuru US network akadai CBS, kunomutsa mibvunzo kana vezvenhau achasika chigumbu chinhu chitsva chinyorwa chevabereki vacho.
Vatori venhau veBrithani vakatotopomera avo vari vaviri kuti vatsausa mamiriro ezvinhu akapoteredza kuberekwa kwemwanakomana wavo Archie Harrison, 6 May, vakawedzera munyori we Daily Daily, Tom Sykes. Mhuri yeumambo inonyanya kushungurudza mharidzo nekuzivisa mangwanani-ngwanani kuti Meghan akanga achizvara, achiziva kuti kutora kwake kwakange kwaitika maawa masere apfuura.
Imwe nyanzvi zvakare yakaratidza kunetseka kwevhiki ino. Mambo akafarira kushanyira naMeghan naHarry kumba kwavo muWesterns Castle nguva pfupi Kuberekwa kwaMeghan, iyo Daily Beast yakati. Mumwe aishamisika kana tete-tete yaMambo pamwe nevakaroorana paFrogmore Cottage yaiva chikamu chekukosha kwake, "Meghan naHarry Plus One", kunyange Page Six uye yakashumwawo iyo inoshanyira
Zuva reBeast Beast rakashuma kuti kushanyira kwaMambo naMeghan naHerry hakuna kumboitika, asi CBS yakangowana kuti ukama hwavo hwomutarisiri weredzi pamwe chete nemurume nomudzimai hwakabatsira mukusimudzira basa ravo.
mashoko vhiki rino achivimbisa kuti "Meghan Harry Plus One" aizogovera njere itsva muhombodo "sei vaviri akagadzirisa kuti upenyu hwavo hutsva uye sei paaiona zvinhu zvakanaka uye kunaka zvichizoita kuti youmambo" .
Kubvunzurudzwa kwakakosha neshamwari dzepedyo dzaMeghan, dzakanga dzisina kumbobvira dzichitaura, sezvinonzi Mambo akanyora mune chimwe chikamu chakanaka. Paanenge achitaurirana naMambo pamusoro pekuti munhu wekare wekuterevhizheni wekuAmerica akabatana neupenyu hupi mumhuri yeumambo, shamwari dzake dzakaramba zvakananga kuti "yakaoma," maererano neshoko iri iro reBritish press, rakabudiswa neCBC.
Daniel Martin, muveki wekugadzira uye anogara kwenguva refu achingochema, akaudza Mambo kuti: "Ndinofunga kuti ndinomuziva zvakanyanya uye ndinoziva kuti haafaniri kukodzera zvose izvo zvisina kunaka."
Martin akatsigirawo kuti "hapana chokwadi" kune zvinyorwa zvinotsanangura shamwari yake se "Decssus Dambudziko".
Idzi tabloid akatsanangura yaimbova Hollywood nyeredzi sezvo zvinovakurudzira kupfeka tiaara wake muchato uye muuye pasi munun'una wake mukadzi Kate Middleton. mumisodzi panguva yekushongedza kwaMambo Charlotte. Other nyaya vakati Harry akanga vakapopotedzana Prince William nekuti mukoma wake - uye ramangwana mambo - haina pakarepo vakagamuchira pfungwa Harry aroore mukadzi akanga akaendepiko munenge gore uye mavambo aCalifornia angave aine zero. musamugadzirira hupenyu hweumambo
Vanyori veBritain neAmerica vakapawo misoro yavo kune kutsoropodzwa kwemucheche mwana wemvura kubva Meghan muNew York muna March. Mambo aiva mumwe wevanhu vakakurumbira vakakokwa pachitambo chaipo, chakanga chakagadzirirwa mune imwe hotera ye 75 000 $ ne Serena Williams naAmal Clooney. Nyanzvi dzeRoyal dzakati mvura iyi yaive "yakanyanya" uye "yakaipa".
Chiratidziro chakasiyana cheMambo wekambiso chinoratidzika kuti chinopa maonero akasiyana aMeghan naHarry. Ndokusaka duchess pamwe zvichibvumira shamwari yake Mambo kuti ataure pamamera pamwe chete nevamwe shamwari dzakanaka.
Vavengi veMeghan naHerry vangangodaro vanoti hupenyu hwaMambo hunopa hutano hwakanaka uye hwakanyatsogadziriswa nevarume ava kwenguva yakareba. VaFans, pamwe chete nevatsoropodzi vezvevhidhiyo, vakapomerawo mabhuku eBrithani mabloids ekuva nechisarura uye zvepabonde mune zvimwe zvekubika kwavo pamusoro pevanhu vehurumende yeMeghan.
Mutori wenhau Janina Gavankar, imwe shamwari yaMeghan iyo yakataura neBBC, yakataura kuti "chinotyisa" ndechekuti mhuri yeumambo inounza kunyika mwana wechivara .
"Vakawanda vedu hatina kukura nemapuranga anotaridzika sesu," Gavankar akati. Mambo nodded.
Gavankar naMartin vakanga vachikurukurirana nemwoyo wose kuti mai vakadini, Meghan, uye Martin aizowedzera kuti Duchess ingangodaro iri kugadzirira zvokudya zvevana.
"Achava mai vakadaro," Gavankar akati. "Ndinofunga kuti zvichange zvichinyanya kugadziriswa zvishoma. Ndinofunga kuti achava akachenjera kwazvo. "
Kana mabhizimisi eBrithani achifunga kuti akazvidzwa naMeghan naHarry vachipa Mambo kupinda kune shamwari dzavo, zvinogona zvakare kuti vamwe vatongi veumambo vanopikisa chigaro chaMambo chairo vachibvumira Meghan naHarry ku ramba uchiratidza kufanirwa kwavo.
Lainey Makuhwa akanyora mwedzi wokupedzisira nezve "munotinyima pfungwa" pakati mudonzvo yamambo, vachiridza dzavo "mitambo munyengeri" uye kurega nyaya kunaka pamusoro Meghan mu kudzima ayo mukurumbira - iyo vakatyisidzira kufukidza kuti William na Kate Izvo zvisingashamisi kuona "mitambo yevatengesi" ichienderera mberi mushure mekunge Mambo ave akakosha.
Asi naMeghan naHarry, Mambo anonyanya kugovera vane ruzivo rwepasi pose kuti vazviratidze nenzira yavanoda kuonekwa.
Mukukurudzira zvakakosha, Meghan naHarry "vari vaviri vakaroorana" uye vakati "vakafuridzira tariro yezvinoitika zveumambo uye vakaita kuti kukurukurirana kutsva pamusoro pezera, feminism uye kubudiswa kwepachipiri.
Mutungamiri Charles akazoona muzukuru wake Archie, shoko renyoro
Vose vashumiri veAustria